श्रवणगितार लागि तार के हुन्?
लागि तार श्रवणगितार संगीतकार, आफ्नो शारीरिक आवश्यकता र प्राथमिकताहरू को आवश्यकता अनुसार चयन पहिलो स्थानमा। एकै समयमा, यस साधन प्रत्येक गिटार लागि धेरै राम्रो ध्वनि हुनेछ जो संग संयोजन मा, विशेष स्ट्रिङ चयन गरियो। केही प्रजाति विचार गर्नुहोस्।
कृत्रिम तार (नायलन) अक्सर शास्त्रीय गिटार लागि प्रयोग गरिन्छ। नायलन अन्य प्रकार संग तुलना व्यावहारिक आफ्नो औंलाहरु काट्नु रूपमा, एक साधन खेल्न सिक्न छिटो अनुमति दिन्छ। यी तार किनभने तनाव को ठूलो लोच बढी गिटार मा प्रयोग गरिन्छ, कमजोर छ, त्यसैले ध्वनि धेरै मेल खान्छ छैन।
तपाईं प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ भने: "के श्रवणगितार लागि सबै भन्दा राम्रो तार", यो व्यवसायीक को टिप्पणीमा जवाफ खोज्न सिफारिस गरिएको छ। दुर्भाग्यवश, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व, गरेर, स्ट्रिङ सामाग्री र ध्वनि फरक कथित भएकोले यो मुद्दा मा विशेष सिफारिसहरू व्यावहारिक असम्भव बनाउन।
तथापि, आजको संसारमा, यो स्पष्ट विश्वस्तता कि गितार लागि सबै भन्दा राम्रो धातु तार गठन। केही तरिकामा सार्वजनिक व्यवस्था, यो प्रकार साधन संग, एक टिकाऊ र विश्वसनीय सामाग्री बनेको छ देखि एक राम्रो रूख को हुनुपर्छ।
श्रवणगितार लागि धातु तार जोर र जोर ध्वनि, तर तिनीहरूलाई अध्ययन गर्न तिनीहरूले के रक्तपातपूर्ण blisters देखा आफ्नो औंलाहरु देखि चोट खन्न रूपमा आवश्यक छैन।
छैन त लामो पहिले लोकप्रिय पेट तार (zhilochnye) थिए। आफ्नो उत्पादन पशु intestines को प्रक्रिया मा आधारित छ, तर तार तिनीहरूले छोटो-बस्ने र चाँडै असफल भएकोले पनि न्यूनतम कम आफ्नो रिलीज को पश्चिम मा गर्दा, रूस मा फेला पार्न कठिन छ। त्यसैले, मिति गर्न, श्रवणगितार धातु लागि सबै भन्दा राम्रो तार। त्यहाँ धेरै अन्य प्रकार र तार को निर्माण को विधिहरू छन्, तर तिनीहरूले कुरा आवश्यक छैन भनेर अलोकप्रिय छन्।
गितार सेट चिल्लो हुनुपर्छ, यो बिस्तारै तार तान्न आवश्यक छ, र तिनीहरूले नयाँ हो भने, तपाईंले तिनीहरूलाई पुल र दिनमा यो स्थिति छोड्न आवश्यक छ। सामाग्री माथि झिकेर हुन्छ, यो सेटिङ उपकरण जारी गर्न सम्भव छ।
तपाईं सुनुवाइ कन्फिगर भने काम गर्दैन, तपाईंलाई एउटा विशेष ट्युनर, पसलहरूमा आफ्नो ठूलो विविधता फाइदाको खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, त्यहाँ अनुसार इच्छित टोन संग श्रवणगितार लागि डिबग तार सक्षम हुनेछ निःशुल्क कार्यक्रम छन्।
गिटार तार खरीद गर्दा निर्माता आदिम प्रविधी मा बनाएको सस्ता सेट रूपमा, प्रतिस्थापित हुनुपर्छ। यो ग्राहक उपकरण परीक्षण गर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न छ। निस्सन्देह, उपकरण को अधिक महंगा मोडेल यस्तो परिवर्तन आवश्यक छैन, तर, कम गुणस्तर तार को 100% मा बजेट विकल्पहरू।
श्रवणगितार लागि तार बेकारी भयो भने, तपाईँ तिनीहरूलाई छानेर परिवर्तन गर्न सक्दैन, यो सम्पूर्ण सेट प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ। आज, रेकर्ड स्टोर स्ट्रिङ को टुक्रा द्वारा बेचिन्छ, तर सबैले विभिन्न सेट त टोन र Timbre फरक हुनेछ ध्वनि फरक, निर्माता व्यक्तिगत प्रविधिहरू अनुसार उत्पादन गरे रूपमा, कि बुझ्नुहुन्छ।
खुत्रुके कागज पैसा धनी प्राप्त गर्न मद्दत गर्न
सुविधा र सिफारिसहरू: रोमन अंधा कसरी धुन
फिल्टर सुराही कसरी चयन गर्ने? फिल्टर
विरोधी तनाव हात कसरी बनाउने?
बच्चाको कोठा लागि nightlight कसरी छनौट गर्ने?
Quads - सक्रिय बच्चाहरु र वयस्क लागि रोलर्स
दक्षता - र यदि सही यसलाई गरेको?
अभिनेता "पछि 28 दिन": प्रमुख र गौण भूमिकाको
"Angostura" - यो के हो? कठोरता को आधार "Angostura" मा ककटेल
जहाँ VAZ-2114 को स्टार्टर रिले छ? सम्भव गल्तीलाई र आफ्नो उन्मूलन
इगोर Girkin (तीर): जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
चकलेट Owls। उल्लू - फोटो। शिकार Nocturnal बर्ड
जवान तारा Alisa Kozhikina
आर्किटेक्ट्स को घर, सेन्ट पीटर्सबर्ग: त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने? समीक्षा
तीन-कोठामा ग्लाजिंग: फाइदा र बेफाइदा
छोराछोरी एक रूघाँ व्यवहार? हामी ठीक कार्य
"Grinch - क्रिसमस चोरेछ।" रोना Hovarda द्वारा अभिनेता क्रिसमस कथा